यो डेन किल्डरबाट पीबीएस कर्मचारीले यो जीवनको धम्कीको खोजी गर्दैछ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
डेन किल्डरमा क्लिकबाट यस जीवन-धम्कीले पीबीएस-ए (पेशेवर आबादी सब्टोनुर) बाट बचाइएको छ। कृपया यो समय कृपया गहिरो फ्याक नदिनुहोस्! यो समय नयाँ विधानको माध्यम धारण गर्न कुनै मनोविज्ञान (मनोवैज्ञानिक अपरेशन) छैन।
निस्सन्देह यो मार्क रोल्टको खेती र खेती ताजा छ टीबीएस बच्यो माइकल पी। को डेन डल्डरको क्लिनिकबाट, तर यो सरल चेहरा-स्वरुप सफ्टवेयर मार्फत कसरी एक गैर-अवस्थित व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोफाईल फोटोले मलाई 10 मिनेटको काम गर्यो (माध्यम बाट यो वेबसाइट) र म सुझाव दिन्छु कि तपाईं तल सार्थक लेख पढ्नका लागि यो पत्ता लगाउनका लागि सजिलै संग त्यस्ता प्रविधिहरू नकली समाचारहरूको जनतासँग खेल्न सकिन्छ।
मैले बारम्बार प्रविधिहरूलाई चर्चा गरेको छु जसको साथ गहिरो वर्णहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। म नयाँ पाठकहरूका लागि दोहोर्याउन चाहन्छु। Deepfakes GAN सफ्टवेयर मार्फत बनाइन्छ। यो कृत्रिम बुद्धिमानी सफ्टवेयर हो जुन, एक नेटवर्कमा बहु एआई प्रणालीमा आधारित छ, क्यारेक्टरहरू कुनै पनि चीजबाट बाहिर निस्कन्छ। एआई कृत्रिम खुफियाका लागि अंग्रेजी हो; कृत्रिम बुद्धि को लागी खडा छ। अर्को AI नेटवर्क त्यसपछि पहिलो सञ्जालको सिर्जना गरिएको छविहरू परीक्षण गर्दछ र अस्वीकार वा अनुमोदन गर्दछ। यो चक्रमा गरेर, क्यारेक्टर प्रत्येक चरणको साथ अधिक यथार्थवादी बनेको छ, ताकि तपाईं अन्ततः पूर्ण रूपमा काल्पनिक व्यक्ति उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ जुन साधारण मानिस जस्तो देखिन्छ (जुन तपाईं सडकमा भेट्न सक्नुहुनेछ)। वर्षौंका लागि चलचित्र उद्योगहरू अवस्थित अवस्थित क्यारेक्टरहरू सिर्जना गर्न सक्षम छन्, ग्राफिक कार्ड विकासकर्ता NVIDIA ले यो सुनिश्चित गरेको छ कि तपाइँ अब यो पनि एक उचित गेम पीसीमा गर्न सक्नुहुन्छ (यहाँ हेर्नुहोस्)। उस्तै कम्पनी (NVIDIA) भर्चुअल वातावरण सिर्जना गर्न सक्षम छ। तल भिडियोमा हेर्नुहोस् र त्यसपछि पढ्नुहोस् जारी राख्नुहोस्।
अब त्यहाँ बजारमा सफ्टवेयर पनि हो जसले तपाईंलाई नियमित रूपमा पीसीमा वेबक्यामेरा (वा सडकमा, ग्रीन्सस्क्रिन मार्फत) बाट प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिन अनुमति दिन्छ र यसको बारेमा अर्को र अनुहार राख्ने अनुमति दिन्छ। यो वास्तविक समयमा र कुनै अवरोध बिना गरिन्छ। तपाइँ यसलाई तल देख्न सक्नुहुन्छ (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)।
यदि तपाइँ यी सबै उपलब्ध स्रोतहरू सँगै जोड्नुहुन्छ भने, तपाईले तपाइँलाई चाहानु भएको कुनै पनि व्यक्ति सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँ यसको इतिहास पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र यो सबै जीवित तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। सम्मोहनशील रूपमा, उदाहरणका लागि, तपाईंले केही वर्ष पहिले एनी फेबरको भिडियो उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ, कारमा आफ्नो बुबाको साथ, र सबैलाई विश्वास छ कि यो वास्तविक हो। वा त्यो सम्भवतः सम्मोहन होइन, तर के यो अभ्यासमा के हुन्छ? के तपाइँ यसलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ? हामी विश्वस्त हुन सक्छौं कि सरकारहरू र मिडियाहरूले नकली खबरहरू उत्पादन गरिरहेका छैनन् र हामी विश्वास गर्न सक्छौं कि गोपनीय सेवाहरू गहिरो फाइदा पत्ता लगाउन प्रविधिहरू विकास गर्दै छन्, तर तिनीहरू केवल गहिरो आत्मनिर्भरहरूका निर्माताहरू हुन्?
त्यसैले यदि यान डे मोलरेयर, सबैभन्दा ठूलो टिभी निर्माता र अफगानिस्तानको (सामान्य डच प्रेस एजेन्सी) को मालिकले सबै साधनहरूको सम्भावना राख्नुपर्दछ र यसैले गहिराइफ्रेजहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईं बिन्दु छ कि हामी मूर्ख हुन सक्छ भन्ने सम्भव छ? मसँग, थप छ, यो धेरै पटक देखाइयो (किनकी मैले प्रदर्शनमा देखिनन् समर्थित सामाग्री संग समर्थित हामी धोखा गरौं)। के हुन सक्छ कि यो धेरै खराब छ कि एक ठूलो टिभि कार्यक्रम जस्तै, एक स्क्रिप्ट विदेश मा बेचेको छ, किनकि यो सफल हुन सक्छ?
"हो, तर व्रिजल्याण्ड, त्यस्ता ठूला पैमानेमा मानिसहरूलाई मूर्ख पार्न लक्ष्य हुनु पर्छ? यस्तो कुरा कसले गर्छ?"त्यसपछि तपाइँ कुन नयाँ नियमहरू लागू भइरहेको छ भनेर ध्यान दिनैपर्छ, केही समयपछि अनी फेबरको मुद्दाको रूपमा। धेरै लेखहरूमा मैले वर्णन गरे किन एनी फेबरको मामला (जसमा माइकल पी। सतावट थियो) प्रायः पीएसओपी (मनोवैज्ञानिक अपरेशन) थियो। थप कानूनको माध्यम धक्का गर्न एक अपरेशन। विधानले जनतालाई सामान्य परिस्थितिमा कहिल्यै गल्ती गर्दैन। यसको लागि, केहि मौलिक हुनुपर्छ।
मलाई पुन: व्याख्या गरेर मिडिया कसरी यो PsyOp खेल खेल्न सक्छ र के हो समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान अधिकतम कि यो यो समय र समय को लागी लागु भएको देखिन्छ र त्यसपछि हामी यो जूली वान एस्पेन र स्टीव बी को मामला मा के देख्न को लागी हेर्न को लागी।
त्यसपछि त्यो अधिकतम समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान? तपाईलाई सरकारको रूपमा के गर्नुभयो: तपाईं ठूलो प्रभावको साथ एक सामाजिक समस्या सिर्जना गर्नुहुन्छ (समस्या) मान्छे को बीच एक भयानक भावनात्मक प्रतिक्रिया को उत्तेजित गर्दछ (प्रतिक्रिया) र नयाँ कानुन र उपायहरू लागू गर्न सक्दछ जुन सामान्यतया कहिल्यै स्वीकार हुँदैन (समाधान)। त्यसपछि तपाईँले प्याकेजलाई "सरकारले सुरक्षामा असफल भएको छ कि समाजले यसको अपेक्षा गर्न सक्छ", भर्खरै डच मंत्री सान्डर डेकरबाट आयो।
त्यसैले तपाईं यस्तो समस्या सिर्जना गर्न उपरोक्त प्रविधिको साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, यसको मतलब यो हो कि तपाईं कुनै पनि साक्षात्कार, भाषण वा कुनै सच्चा तस्वीरको लागि कुनै पनि परीक्षणको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईं साँच्चै तपाईंको आँखाहरू विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। टेलिभिजन र अन्य मिडियाले प्राविधिक रूपमा गैर-अवधारणात्मक क्यारेक्टरहरूमा सास फेर्न सक्षम छन्। यद्यपि यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि यो फोनको साथ रेकर्ड गरियो र के यो क्यामेरा क्यामेराबाट आउँछ, तपाई निश्चित हुन सक्नुहुन्न कि यो प्रामाणिक हो। सबै कुरा सम्भव छ र मिडियाको संसारमा असंभव हुँदैन। तपाईलाई सधैं ध्यान दिनुपर्छ जसमा समाधान यस्तो प्रमुख घटना पछि केही समय पछि।
"तर Vrijland, एनी फाबरको हत्याले पनि राम्रोसँग भयो होला?"हो, तपाईं केवल लेखको श्रृंखलामा गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले लेखेको थिएँ (हेर्नुहोस् यहाँ) यो स्पष्ट भएको छ कि यो धेरै सम्भावनाको कथा सकियो। कुन युवा महिला एक बाइकमा जान्छ र एक भविष्यवाणी गर्नको लागि साइकल चलाउछ र त्यसपछि ANWB मार्गमा साइकल चलाउन सुरु हुन्छ र किन यो एक्सएनएक्सएक्स अक्टोबरमा कोट फेला पर्यो र यसले डीएनए म्याचको लागि माइकल पनहुजसँग कस्तो अनुभव गर्यो? त्यो बस सही छैन। एनएफआई यो गर्न सक्छ6घण्टामा गर्न। किन माइकलले सबै भेटिएका वस्तुहरू वरिपरि फैल्यो र उनीहरूको के हो? स्कूटर सवारी पछि एनी फेबर संग? किन त्यो पहिले दफन गरियो र त्यसो गरेपछि फेरि र फेरि गाडिने? किन फोर्ससेनिक र ओटोप्सी रिपोर्ट देखाइएको छैन अदालतको मामलामा? ओह राम्रो छ, र यस मामला मा धेरै अधिक विषमताहरु छन्, तर मुख्यतः किनकि तपाईंले भावनात्मक आमाबाबु को छवियों देख्नुभएको छ, तपाईमा विश्वास गर्न आएको छ। रोमाञ्चक कहानी र खजाना शिकार (समस्या) भावनात्मक रूपमा मानिसहरु लाई धेरै प्रभावित गरे र यसैले यो मा भयो प्रतिक्रिया नयाँ कानूनलाई गल्ती गर्न (समाधान)। यो तपाईंको बच्चा वा अहिले द्वारा गर्न सकिन्छ आफैलाई पनि हुन्छ:
अनी फेबर र माइकल पी को मामला मा हावा मा एक घंट जस्तै पतला छ र यो लाग््छ कि कहानी एक ठूलो स्तर मा न्यायपालिका, मीडिया र राजनेताओं को सहयोग संग को रूप मा नयाँ कानून को माध्यम ले धक्का को लागि मानिसहरू कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन्। मानिसहरू भावनामा भारी खेल्दै, मानिसहरू कानुनको यस्तो परिवर्तनको पक्षमा विश्वस्त छन्, किनभने सबैले यसलाई राक्षस माइकल पी को लिङ्कमा लिन्छ।
मिडियाले हामीलाई विश्वास गरेको छ कि यो सबै सत्य हुनेछ, तर हामी यसलाई कहिल्यै आफैलाई जाँच गर्न सक्नेछैनौं र हामी मान्न सक्छौं कि हामी हलिवुड प्रविधिहरूसँग खेल्दै छैनौं। परिणाम यो हो कि मान्छे बिना मनोवैज्ञानिक रूप देखि दूर रहन सकिन्छ र उनको अपराध सबै उनको जीवन मा गायब हुन सक्छ, किनकि कानून अब उनको रक्षा गर्छन। (पढ्नुहोस् यहाँ अगली कड़ी)
स्रोत लिङ्क सूची: facewaponline.com, telegraaf.nl
जोस बी (निकई वर्स्टप्पेन) अहिले पीएसओपीले एक वकीललाई क्लाइन्ट स्टेटमेन्टहरूको माग गर्न पनि प्रयोग गरे?
ट्याग: एनी, को, पागल, Faber, विशेष, क्लिनिक, klinkiek, माइकल, नकली समाचार, भाग्यो, भाग्यो, P., प्यान घर, tbs, tbser
5 जून 2019 मा 20: 19
यो एक समान डिकर जसले कानूनी सहायता हटाउन खोज्छ, त्यसैले महोदयले उहाँका अर्डरहरू प्राप्त गरेका छन् .. बेफहेल्ल आइटी बेफेल। पहिलोमा मैले सोचेको थियो कि टम वैनको हे हकको पागल भाईले बचाउ गरेको छ
5 जून 2019 मा 20: 24
फोटोले मलाई विशेष गरी लियो ब्लखुआईको सम्झना दिलायो। सम्भवतः तिनीहरूले यसलाई गहिराइको उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरे?
5 जून 2019 मा 20: 29
आँखाले मलाई टम वान 'टी हेकको सम्झना दिलायो ... पहिलो प्रेरणा।
5 जून 2019 मा 21: 07
त्यो सन्देश धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले यो संकेत गर्दछ कि उनीहरू कानून बनाउन तयार हुन्छन् जहाँ सबै भित्र भित्र बस राखिनेछ। त्यसैले छोड्ने व्यवस्थाको उन्मूलन।
5 जून 2019 मा 21: 08
गोलाग गुलाग छ र तपाइँले केवल आफ्नो जीवनका बाकीको लागि विपरित रूपमा बसिरहनु पर्छ।
5 जून 2019 मा 20: 32
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। तपाईले आशा गर्नुहुनेछ कि उनीहरु महत्वपूर्ण सोचकर्ताको लागि एक विश्वसनीय गहिरो तयारी गर्न एकदम बढी समय खर्च गर्दछन्
5 जून 2019 मा 20: 35
.. अब म ब्रेक, दाढ़ी, रातो आदि संग समानांतर बारेमा अधिक गल्ती गर्दछ = एनएलपी लंगर
5 जून 2019 मा 20: 42
5 जून 2019 मा 20: 49
@Analyze तपाईंको मतलब के हो भनेर बुझ्न, गूगल को माध्यम बाट त्वरित खोजी josbमा यी प्रकारका नतीजाहरू देखाउँछ। योस बीको अन्तिम 8 घण्टा पहिले RTL, SBS जस्ता मिडिया च्यानलहरूमा अपलोड गरिएको थियो। यो छवि 8 घण्टा पुरानो हो र ताल्पा नेटवर्क (डे मो) को सम्पत्ति हो
5 जून 2019 मा 20: 55
तिनीहरू, लिपिहरूका साथीहरू वास्तवमा स्पाइप विश्वसनीय बनाउन प्रयास गर्न जाँदैनन्। पहिरन उनीहरूको शक्ति छ। ह्यानमा कसले लिन सक्छ? तिनीहरू सबै प्रमुख स्थानमा छन्। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू जान्दछन् कि औसत Neanderlander को iq कसरि कम छ। जो मान्छे यो बुद्धिमानी देखि आफ्नो मुख बन्द छ किनकी उनि आफैले नेदरल्याण्डल्याण्ड को क्लब को भाग हो कि सबै कुरा को निर्धारण गर्दछ।
यो तपाईंको अनुहार धोखा मा बस र लंगर / स्टैंप को माध्यम ले छ कि स्पाइप / थियेटर उत्पादन 'सरकार' देखि आउछ, नेंडरल्याण्डर को महत्वपूर्ण सोच पारित भएको छ। यदि तपाइँ अहिले पनि प्रोग्रामहरू पनि गर्नुहुन्छ! मेर मस्तिष्कवाटले लिपिबाट केटाकेटीलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछ, उनीहरूको लागि कुनै रकम तिर्न सकिदैन, जसको अनुहारले उनको चेतनालाई फैलाउँछ, त्यसोभए महत्वपूर्ण सोच भ्रामक पारित हुन्छ। तर यदि न्यान्न्डर्यान्डर आफ्नो कमेसीबाट आउँछ र सोच्छ भने केहि गलत छ। उसले के गर्न जाँदैछ, उसले के गर्न सक्छ र जब तिनले थाहा पाउँछ कि त्यो आफ्नो कोनामा फिर्ता हुनेछ। शुभ रात्रि, दासहरू। स्क्रिप्टका केटाहरू दृश्य पछि हँसिन्छन्।
6 जून 2019 मा 18: 10
हाहाहा र अब अचानक उनको आँखाको सामने एक पल्ट, तपाई के मतलब छ?
6 जून 2019 मा 00: 07
यदि तपाईंसँग प्रमाण छ कि Sinterklaas अवस्थित छैन, तब बच्चाहरु लाई अझै विश्वास छ कि यो अवस्थित छ, किनभने यो कसरी हुनुपर्छ र हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, यो एक पार्टी हो, छोराछोरी एक्लै छोड्नुहोस्।
निस्सन्देह नागरिकहरूले मनोगोथलाई सडकमा हत्याको पृष्ठभूमिको साथ चाहँदैनन्, तर अब अन्य बासिन्दाहरू एक भिक्षुमा ल्याइन्छन्।
पुरानो बोली: नाशपाती संग सेब तुलना।
यस लेखमा नि: शुल्क शब्दको अन्तले टेलीग्राफबाट जहाँ उनीहरूले नाटकहरूको महिमालाई एक भेदभावको रूपमा फेंकन्छन्।
भाषण र शोषणको स्वतन्त्रतालाई रोक्न धेरै विषम असक्षमता।
6 जून 2019 मा 06: 21
तिनीहरू नाजी छविहरू र प्रचारकार्य हटाउँदैनन्। तिनीहरू अक्सर यो जानकारी हुन् जसले यो जानकारी प्रकाशित र वितरण गर्दछ। अन्ततः, उनीहरूलाई एक बूगीम्यान चाहिन्छ। रो ब्वाँसो
6 जून 2019 मा 09: 16
कम्तिमा तिनीहरूले यो राम्रो अभिनेत्रीलाई भर्ती गरेका छन् ...
यो स्पष्ट छ कि नयाँ कानून पेश गर्न आवश्यक छ।
बहिनी भाइको जीवनलाई माया गर्नुहुन्छ, तर नियमित रूपमा उनी क्लिनिकमा भेट्छन्। "तपाईं विश्वसनीय हुनुहुन्छ, म भन्न सक्छु कि सबै भन्दा ठूलो गल्ती तपाईंले बनाउन सक्नुहुन्छ" सम्भवतः यस अभिनयको लागि उपयुक्त। आमाको ढोका बन्द हुनु पर्छ, किनकि भाइले उसलाई चोट पुर्याउन चाहन्छ। तर हामी साप्ताहिक आधारमा भ्रमण गर्छौं (किनकी उसले केवल यसको दबाइ राम्रो हुन्छ)।
6 जून 2019 मा 09: 24
जेएनएमएमएक्स मिनेटमा जेरोन पउउले हामीलाई सम्पादकीय कार्यालयमा कस्तो सफ्टवेयर देखाउँछन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई पुरानो बनाउन कुनै समस्या छैन।
अनुहार (गृहिणी) बहनको गहिरो अनुहारको भाई सम्भव राख्न कुनै समस्या छैन?
6 जून 2019 मा 09: 44
त्यो रूट जस्तो लाग्छ! तिनीहरूले रूटको आँखा प्रयोग गरे! उनीहरूलाई चिन्ता गर्नका लागि मात्र उनीहरु बिग्रिएका छन् भनेर संकेत! रेलमा रमाउनुहुन्छ! हामी पनि जलवायु (डरावनी) कानून संग सम्झौता गर्नु पर्छ!
6 जून 2019 मा 11: 11
के मैले लेखेको के पढेको छु? मैले यो प्रोफाईल फोटोको दृष्टान्तको रूपमा बनाएँ। केवल तस्वीरको जवाफ दिदै बरु लेखको सामग्री पढ्नुहोस्।
6 जून 2019 मा 11: 17
हजुरआमा ट्रल्स पढ्न नपाएपछि तिनीहरू केवल कुराकानीका विषयहरू पठाउन चाहन्छन्। सायद उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा थाहा छ
6 जून 2019 मा 10: 56
फोटो पसल केवल डे मो र साथीहरूका लागि छ, बाँकी फिल्टर गरिएको छ।
6 जून 2019 मा 17: 03
सौभाग्य देखि तिनीहरूले पीटर एम छ। नेदरल्यान्डका लागि कस्तो राहत अर्को निर्देशित भाग नभएसम्म राम्ररी सुत्नुहोस्। कुन देश, दासहरूले सबै कुरा मान्छन् पिता भन्छन्।
« जोस बी (निकई वर्स्टप्पेन) अब PsyOp एक वकीललाई क्लाइन्ट स्टेटमेन्टहरूको माग गर्न पनि प्रयोग गरियो?
पीटर एम। (त्यो विश्वसनीय बहनबाट जेरोन पउव सम्म) फेरि पक्राउ गरिएको छ »
कुल भ्रमण: 12.276.088